यस्तो बन्दै छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं । विकासमा फड्को मार्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली विकास आयोजना प्राधिकरण गठन प्रस्तावसहित वाम गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेट निर्धारण गरेको छ।
भूकम्पपीडितको आवास निर्माण, राष्ट्रिय परिचय वितरण, जनताका जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयदेखि विकास आयोजनासम्ममा सरकारले गर्ने योजनाको फेहरिस्त प्रतिवेदनले समेटेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारले कुन कार्यक्रम कति वर्षको अवधिमा पूरा गर्ने र लगत कति लाग्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको छ।